Mamorona tranolay vaovao - vokatra maoderina Green Shina
Alohan'ny hametrahanao lay lay, dia tokony ho fantatrao izay ho ampiasaina amin'ny tranolay, ary inona ny tontolo iainana no ampiasaina amin'ilay tranolay, toy ny ny toby, ny fiakarana, ny tora-pasika, ny tafika, na ny fialofana amin'ny masoandro, izany no ampiasaina amin'ny faritra mangatsiaka na mafana faritra, misy rivotra mahery sy orana, misy fepetra takiana manokana. Avy eo dia afaka manomboka mamorona tranolay ianao.
Eto isika dia haka lay toy ny ohatra. Ity tranolay ity dia ho an'ny tsenan'i Alemaina ho an'ny tobin'ny toby. Mila mifanaraka amin'ny olona 3, napetraka haingana ary akaiky, dia tokony hiasa mandritra ny herinandro iray, mila manana habaka ho an'ny rucksack, shoes ary accessories. Avy eo isika dia mizotra amin'ny dingana manaraka.
Araka ny ISO5912, ny olona tsirairay dia tokony hanana toerana manodidina ny 200 x 60cm, ny olona 3 tsy tokony ho kely noho ny 200 x 180cm. Satria lehibe kokoa noho ny mahazatra ny olona any Alemana dia manapa-kevitra isika fa manana ny halehiben'ny 210 x 200. Ny haavony amin'ny ankapobeny manodidina ny 120-140cm ho an'ny tranolain'ny igloo, dia manapa-kevitra izahay fa 120cm, satria tokony ho 20cm ny sisa tavela ho an'ny rafitra napetraka haingana. Mba hananana toerana ho an'ny rucksack sy kojakoja sasany, dia maniry izahay ny hanana vestibule manodidina ny 80-90cm eo anoloana varavarana. Ankehitriny, afaka manomboka manamboatra ny sketsa isika. Betsaka ny mpanamboatra tranolay no manana sampana famolavolana mandritra ireo taona ireo.
Rehefa vita ny fanaovana «sketsa» dia hanao ny lovia araka ny «skéc» ny mpanaingo. 10 taona lasa izay, tranona tranolay maro no manamboatra ilay takelaka, saingy ankehitriny, ny ankamaroan'ny mpamatsy lay dia manamboatra ilay takelaka amin'ny alàlan'ny rindrambaiko.
Soraty aloha ilay takelaka, dia tapaho ny lamba arakaraka ny lovia.
pirinty ny takelaka lay
Manjaitra ny santionany voalohany.
Ataovy tsara ny santionam-panandramana ary jereo raha tsara na mila fanatsarana, mila jerena matetika ny modely, ny habeny, ny firafitra, ny fananganana, ny fametrahana ary hifarana amin'ity dingana ity. Raha tsy maninona ny zava-drehetra, dia ataovy ny tranolay farany miaraka amin'ny fitaovana sy ny tokony ho izy. Raha misy mila fanovana dia tapaho ny lamba ary ataovy 2 nd , 3 rd , 4 th … andramo santionany ary avereno jerena indray. Rehefa nangataka sy nanakaiky haingana ity tranolay ity dia misafidy rafitra toy ny elo isika.
Rehefa vita ny santionany amin'ny andrana, dia alao ny santionany farany amin'ny lamba mety, ampiasao ny hika sy ny kojakoja tsara, toy ny tsatokazo, ny tadin-drivotra. Satria ity tranolay ity dia natao ho an'ny tompon-toby mandritra ny iray herinandro fara-fahakeliny. Manapa-kevitra izahay ny hanao lamba vita amin'ny rano avo ary alefaso ny zaitra. Avy eo, ataovy ny fitsapana arakaraka ny tontolo ampiasaina ampiasaina. Toy ny rano madio, ny fanoherana ny rivotra, ny fanoherana ny UV, ny fanoherana ny kofehy, ny fantsom-bahoakan'ny rivotra, ny fahafaha-mavesatra…
Eto dia fomba fanao mahazatra amin'ny famoronana lay vaovao, afa-tsy ireo olana etsy ambony, maro ny olana hafa tokony hodinihina, toy ny lanjan'ny singa, ny habetsaky ny fonosana, ny faharetana, ny fandefasana ny rano, ny fiarovana, ny fangatahana lalàna any amin'ireo firenena mpampiasa farany . Raha ho an'ny miaramila ny tranolay, toa ny tranoben'ny miaramila izay novokarinay ho an'ny mpikambana NATO, izay sarotra be dia be ary tokony handinika bebe kokoa sy hanandrana bebe kokoa.